Korea Atsimo: Tatitra toetr’andro mivantana amin’ny alalan’ny Twitter mandritra ny rivo-doza Typhoon · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2010 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, 日本語, Español, English
Nahavoa indray Twitter tany Korea Atsimo tamin'ny tatitra toetr'andro mivantana mandritra ny rivo-doza mahery nandrava ny peninsule Koreana androany. Nandravarava ny firenena avy hatrany ny rivo-doza mahery Kompasu taloha sy nandritra ny fotoam-piasàna — namaky fitaratra, nanongotra hazobe, nandrava rindrina ary namotika kianja mihitsy aza. Nandefa bitsika ny olona mba hampandre ny hafa ny misy ireo làlana tsy voasakan'ireo hazobe sy takelaby nentin'ny rivotra, ary (namerina) ni-tweet ireo fanampim-baovao farany sady nampakatra sarin'ireo faharavàna.
Adiny dimy monja ny rivo-doza mahery Kompasu (“compass” amin'ny teny Japoney) no tao an-tanàn-dehiben'i Seoul, nefa namely mafy nahavita ireto fandravàna hita sary ireto izany. Ny rivo-doza tropikaly mahery indrindra nahavoa ny faritra tao anatin'ny 15 taona, dia nampiato ireo fanamboarana metro, niteraka fahatapahana goavana tamin'ny herinaratra , ary nanery ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka hanafoana na hanova lalana ireo sidina. Noho ilay rivo-doza nahatratra ny heriny faran'ny ambony tany amin'ny 5 na 6 ora maraina, ora tany an-toerana, an'aliny maro ireo mponina avy lavitra no tratran'ny heriny mpanimba raha mbola teny an-dàlana handeha hiasa. Ireto sary ireto dia nalefa tweet avy amin'ireo olon-tsotra mpitati-baovao mba hampisehoana amin'ny hafa izay zava-bitan'ny rivo-doza any amin'ny manodidina ny toerana misy azy ireny, sy hanome torohevitra momba ny toetoetry ny làlana.
Na ny ‘general stadium’ aza tsy nanam-bintana nanoloana ny rivo-doza.
Mikorontana tanteraka ny arabe. Tena mampihorohoro ny rivo-doza.
Nilatsaka avy teny amin'ireo trano ireo fitaratra sy (arofanina) fefy tamin'ny lavarangana.
Niongana ny takelaby manondro ny ‘Home Plus’ [fanamarihana: Walmart amin'ny fomba Koreana].
Izao no zava-misy amin'izao fotoana eo alohan'ny Galleria (trano fivarotana) any Apgujeong, raha tianao ho fantatra.
Maro ireo nizara ny zava-misy momba ny toetoetry ny fifamoivoizana:
#gangnam [fanamarihana: anarana distrika] Nidaboka ny andrin-jiro nitsangana teo amin'ny ilany havanan'ny làlana mampitohy ny Tobin'ny Polisy any Eun-ma amin'ny Sekoly Hui-mun…tamin'ny 6: 30 maraina tany ho any…nibahana ny antsasaky ny lalana izy io, tsy maintsy niampita eny afovoan-dàlana aho (hialàna amin'io)…Efa nisy nanala ve izany izao?
Mijanona mandritra ny fotoana fohy ny Zotra faha-7 isaky ny toby fiantsonana rehetra rehefa nandany fotoana niampita ny tetezana ChungDam…
Vakin'ny rivo-mahery ny fitaratry ny varavarankely. Mba hisorohana ny fahavakisan'ny fitaratra, asio gazety mandon'ny rano amin'ny fitaratra. – Foiben-toerana Fisorohana ny Loza sy Sehatra fandraisana Fepetra #Typhoon_Kompasu
Noho ny ankamaroan'ireo làlam-by ambonin'ny tany tsy afa-miasa ao an-tanàna, niaina ny lozan'ny fitaterana ratsy indrindra tao anatin'ny taona maro ireo mponina avy lavitra, fa i Twitter kosa nanampy ireo sasany handrindra izany.